ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ (ကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်) | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးလေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့်လေလံစက်ရုံ ၁၀ ခုအနက် ၈ ခုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်တည်ရှိပြီး ၅ ခုမှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အကြား TOP 10 တွင်ကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်တစ်ခုသာရှိသည်, အားလုံးအခြားသူများကိုကုန်းဖြစ်ခြင်း။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုတပ်ဆင်နိုင်စွမ်းအရသိရသည်ခွဲခြားသွားကြသည်:
1 ၁။ Alta Wind Power Center:
2 ၂ ။
3 ၃။ Roscoe Wind Farm:
4 ၄။ Horse Hollow Wind Power Center -
5 ၅။ Capricorn Ridge Wind Farm:
6 ၆။ London Array Offshore Wind Farm:
7 ၇။ Fantanele-Cogealac လေစိုက်ခင်း
8 ၈ ။
9 ၉ ။
10 ၁၀ ။
၁။ Alta Wind Power Center:
El Alta လေစွမ်းအင်စင်တာ United States, California, Tehachapi တွင်တည်ရှိသော (AWET, Alta Wind Energy Center) သည်လက်ရှိတွင်ရှိသည် ၁.၀၂၀ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်သောကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ။ ကုန်းတွင်းလေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကို Terra-Gen စွမ်းအင်အင်ဂျင်နီယာများကလည်ပတ်သည်။ ထိုလေယာဉ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ရန်လက်ရှိတိုးချဲ့မှုအသစ်တွင်နှစ်မြှုပ်နေသော 1.550 မဂ္ဂါဝပ်.
၎င်းသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်ပြည်နယ်၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ Arlington အနီးတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်စွမ်းအင်တပ်ဆင်ထားပြီးကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်သည်။ 845 မဂ္ဂါဝပ်.
Caithness စွမ်းအင်အင်ဂျင်နီယာများကတီထွင်ခဲ့သောဤစက်ရုံသည် Gilliam နှင့် Morrow ခုတို့အကြား ၇၇ ကီလိုမီတာကျော်ရှိသည်။ အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာများကတီထွင်အဆိုပါစီမံကိန်းကို ၇၇ ကီလိုမီတာအကျယ်ရှိသော Caithness Energy Gilliam နှင့် Morrow ခုတို့အကြားတည်ဆောက်မှုကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ပန်းခြံအား GE338XL တာဘိုင် ၃၃၈ လုံးဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး၊ nominal capacity 2.5 MW ရှိသည်။
၃။ Roscoe Wind Farm:
El Roscoe လေစိုက်ခင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Texas ရှိ Abilene အနီးတွင်လက်ရှိတွင်စွမ်းအင်တပ်ဆင်ထားသည့်တတိယအကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံဖြစ်သည် 781,5 မဂ္ဂါဝပ်, E.ON ရာသီဥတု & ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ (EC & R) အင်ဂျင်နီယာများကတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းအဆင့် ၄ ဆင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးkmရိယာ ၄၀၀ ကီလိုမီတာcoveringကကျယ်ဝန်းသည်။
အထူးသဖြင့်ပထမအဆင့်တွင် ၁ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ Mitsubishi တာဘိုင် ၂၀၉ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်တွင် ၂.၃ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ Siemens တာဘိုင်များတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးတတိယနှင့်စတုတ္ထအဆင့်တွင် ၁.၅ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ၁၆၆ GE တာဘိုင် ၁၆၆ နှင့် ၁ မဂ္ဂါဝပ်ရှိမစ်ဆူဘီရှီ ၁၉၇ တို့ပါဝင်သည်။ အသီးသီး။ စုစုပေါင်း, အကွာအဝေး ၂၇၄ မီတာအကွာအဝေးတွင်လေစွမ်းအင်တာဘိုင်ပေါင်း ၆၂၇ တပ်ဆင်ခဲ့သည်၂၀၀၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ လမှစ၍ စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဖြင့်အတူတကွစတင်ခဲ့သည်
၄။ Horse Hollow Wind Power Center -
ဤဥယျာဉ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိတေလာနှင့် Nolan ကောင်တီကြားတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိကမ္ဘာ့စွမ်းအားအရှိန်အဝါဖြင့်စွမ်းအားရှိသောစတုတ္ထအကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်သည်။ 735,5 မဂ္ဂါဝပ်။
Blattner Energy အင်ဂျင်နီယာများသည်စီမံကိန်းအတွက်စီမံကိန်းအတွက် EPC ကိုတာဝန်ယူထားသည့်အဆောက်အအုံများကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်းအဆင့်လေးဆင့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အထူးသစီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်သုံးဆင့်တွင် 142 လေတိုက်တာဘိုင် installed ခဲ့ကြသည် GE မှ 1,5 MW၊ Siemens မှ 130 2,3 MW နှင့် 149 MW မှ 1,5 MW အသီးသီး GE.
၅။ Capricorn Ridge Wind Farm:
၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Sterling နှင့် Coke ကောင်တီများကြားတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးကမ္ဘာ့ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်သည်။ 662,5 မဂ္ဂါဝပ်, NextEra စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုအင်ဂျင်နီယာများကလည်ပတ်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပထမကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဒုတိယမှာ ၂၀၀၈ တွင်ဖြစ်သည်။
လေအားစိုက်ထုတ်စက်ရုံတွင် ၃၄၂ GE 342 MW လေတာဘိုင်များနှင့် ၆၅ Siemens 1,5 MW လေတာဘိုင်များရှိပြီးမြေပြင်မှ ၇၉ မီတာကျော်အကွာတွင်ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်လေအားလျှပ်စစ်သည်လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် ထက်ပို 220.000 အိမ်များ။
၆။ London Array Offshore Wind Farm:
London Array သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဏ္ဏဝါဥယျာဉ်ဖြစ်ပြီး ၆၃၀ မဂ္ဂါဝပ်တပ်ဆင်နိုင်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းအဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်။ Dong Energy, E.ON နှင့် Masdar ရှိအင်ဂျင်နီယာများမှတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောစက်ရုံများသည် Kent နှင့် Essex ကမ်းရိုးတန်းများမှကီလိုမီတာ ၂၀ ကျော်ဝေးသောသိမ်းစ်မြစ်ဝတွင်တည်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကမ်းလွန်ပန်းခြံဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏မြှင့်တင်သူများက၎င်း၏စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်ရန်စီစဉ်ကြသည် ဒုတိယအဆင့်တွင် 870 MW အထိရှိသည် ဆိုင်းငံ့ထားအတည်ပြုချက်။
၇။ Fantanele-Cogealac လေစိုက်ခင်း
El Fantanele-Cogealac လေမွေးမြူရေးခြံ ရိုမေးနီးယားရှိ Dobruja ခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်စွမ်းအင်တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့သတ္တမမြောက်အကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်သည် 600 မဂ္ဂါဝပ်။ CEZ Group မှအင်ဂျင်နီယာများကတီထွင်ခဲ့သောစီမံကိန်းသည်ပင်လယ်နက်ကမ်းရိုးတန်း၏အနောက်ဘက် ၁၇ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ပွင့်လင်းသောနိုင်ငံတွင်ဟက်တာ ၁ ဝ ၉၂ ကျယ်ဝန်းသည်။
လေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ပထမဆုံးတာဘိုင်ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင်တပ်ဆင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလကနောက်ဆုံးတာဘိုင်၏ဇယားကွက်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးကုန်းတွင်းလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ။ အဆိုပါစက်ရုံများကိုပျမ်းမျှလှည့်ပတ်စက် ၉၉ မီတာနှင့် ၂.၅ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် GE 240 XL လေတာဘိုင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးရိုမေးနီးယားရှိစုစုပေါင်းစိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံကိုအတူတကွကိုယ်စားပြုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Indiana ပြည်နယ်၊ Benton ကောင်တီတွင်တည်ရှိသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အh္ဌမအကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်။ BP Alternative Energy မြောက်အမေရိကမှအင်ဂျင်နီယာများနှင့် Dominion အရင်းအမြစ်များမှအင်ဂျင်နီယာများကတီထွင်ခဲ့သောစီမံကိန်းကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစုစုပေါင်းတပ်ဆင်နိုင်စွမ်း 599,8 မဂ္ဂါဝပ်.
ဟက်တာ ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိသောလေအားစိုက်ခင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ အဆောက်အအုံများကို ၁၈၂ Vestas V20.000-2008MW လေရဟတ်များ၊ Clipper C-2010 လေရဟတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ 182 MW နှင့် 82 GE 1.65 MW လေတာဘိုင်များပါ ၀ င်သည်။ လေအားစိုက်ခင်းသည်အတူတကွလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် 200.000 ကျော်နေအိမ်များများအတွက်ပါဝါ။
El ရေချိုပန်းခြံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Nolan ကောင်တီတွင်တည်ရှိသောလေစွမ်းအင်တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့န ၀ မအကြီးဆုံးလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံဖြစ်သည် 585,3 မဂ္ဂါဝပ်Duke Energy နှင့် Infigen Energy အင်ဂျင်နီယာများပူးပေါင်းတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကိုအဆင့်ငါးဆင့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်ပထမ ဦး ဆုံးမှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်စီးပွားဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးကျန်လေးခုကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် 392 တာဘိုင်စုစုပေါင်းGE ၁.၅ MW လေစွမ်းအင်တာဘိုင် ၂၅ ခု၊ GE SLE 25 MW လေတာဘိုင် ၂၅ လုံး၊ ၁၃၅ Mitsubishi ၁၀၀၀ MW လေတာဘိုင်များနှင့် 1,5 Siemens 151 MW လေတာဘိုင်များအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Abilene ၏အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ ၃၀ တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ဖြစ်သည် ၁၀ ခုမြောက်လေယာဉ် တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 523,3 မဂ္ဂါဝပ်AES လေမျိုးဆက်ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်သည်။ စီမံကိန်းကိုအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပထမမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး ၂ ခုမှာ ၂၀၀၇ နှင့် ၂၀၀၈ တွင်ဖြစ်သည်။
လေအားလျှပ်စစ်၏ပထမအဆင့်တွင် 67 Vestas V-80 1,8 MW လေတာဘိုင်များတပ်ဆင်ထားသည်။ အောက်ပါအဆင့်ပေါင်းစည်းနေစဉ် 155 GE 1,5 MW လေရဟတ်နှင့် 74 Siemens 2,3 MW လေတာဘိုင်အသီးသီးတွင်စုစုပေါင်းလေအားလျှပ်စစ် ၂၉၆ ခုရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံးလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ